Jaamacadda Zonguldak Bülent Ecevit oo shaqaaleysiinaysa shaqaalaha tacliinta | RayHaber | raillynews
Jaamacadda Zonguldak Bülent Ecevit waxay shaqaaleysiin doontaa shaqaalaha tacliinta; Shuruucda Nidaamyada iyo Mabaadi'da Ku Saabsan Imtixaanaadka Bartamaha iyo Imtixaanada Galitaanka ee Loogu Tala Galay Ballamada Shaqaalaha Kuliyada Aan Ka aheyn Shaqaalaha Aqoonta Aqoonta Waxaa lagu daabacay Rasmiga rasmiga ah ee ku taariikhaysan 09.11.2018 iyo 03.10.2019 ee loogu talagalay codsiyada iyo ballamaha lagu sameynayo shaqaalaha tacliinta ee ay shaacisay Zonguldak Bülent Ecevit University in la adeegsan doono.
Taariiqda Bilaabida Ogeysiiska: 05.12.2019
Xilliga Kama Dambaysta Codsashada: 19.12.2019
Taariikhda Ogeysiiska Natiijada Natiijada: 25.12.2019
Taariikhda Imtixaanka Galitaanka: 30.12.2019
Taariikhda Tilmaanta Natiijada: 07.01.2020
Muddada codsigu waa maalmo 15 laga bilaabo taariikhda la daabacay xayeysiiska.
Marka loo eego shuruudaha guud iyo gaar ahaaneed ee dalabka, codsadayaasha codsanaya shaqaalaha kulliyada waxaa laga rabaa inay ku lifaaqaan dukumiintiyada soo socda codsiyadooda si loogu gudbiyo Xafiiska Dean ama Dugsiga Sare;
3- Nuqul ka mid ah shahaadada Bachelor's, dokumentiyada Master-ka iyo doktariga ama soo saarista E-Government, (U dhiganta u dhiganta shahaadooyinka dibedda laga helay waa in la oggolaadaa.)
4- Nuqul shahaadada jaamacadeed, Master iyo Doctoral Transcript sawiro nuqul ah,
5- Nuqul sawir ah oo ah Shahaadada Luuqada qalaad
6- Hal sawir,
7- Dib u Bilow,
8- Shahaadada Imtixaanka Bartamaha (ALES),
9- Shahaadada Diiwaangelinta Garsoorka (1 ugu dambeysay (mid) bishii))
10- Dukumiinti sheegaya in adeegga millatariga uu yahay mid la dumiyay, la hakiyey ama laga reebay murashaxiinta labka ah,
11- Shahaadada adeegga / shahaadada la oggolaaday,
12- Foom Codsi (http://personel.beun.edu.tr/icerik/14/cesitli-formlar.html cinwaanka).
- Codsiyada waa in lagu sameeyaa shaqsi ahaan ama boostada.
- Dib u dhacyada ku yimaadda boostada lama aqbali doono ama codsiyada lama aqbali doono haddii mid ka mid ah dukumiintiga kore la la'yahay.
- Cinwaanka internetka meesha natiijada lagu shaacin doono: http://w3.beun.edu.tr
- 1 (hal) qof ma codsan karo wax ka badan hal shaqaale isku waqti. Dhammaan codsiyada murashaxiinta ee lagu helo inay codsadaan wax kabadan hal shaqaale waa la joojinayaa.
- Kuwa lagu helo inay warbixin been abuur ah ka sameeyeen dukumiintiyada loo baahan yahay waxaa loo qaddarin doonaa inay yihiin wax-kama-jiraan lamana magacaabi doono. Xitaa haddii la magacaabo, waa la tirtiri doonaa xaqna uma sheegan karaan.
- Jaamacadeena waxay xaq u leedahay inay isbedel ku sameyso jadwalka imtixaanka oo baajiso marxalad kasta oo lagu dhawaaqo. Dhammaan ogeysiisyada lagu sameeyo websaydhka jaamacadda waa la soo ogeysiinayaa. Ogeysiis qoraal ah looma sameyn doono dadka.
(1) Marka ballamaha lagu dhigayo shaqaalaha tacliinta ee ku xusan xeerkan;
a) In la buuxiyo shuruudaha lagu qeexay Qodobka 657 ee Sharciga Shaqaalaha Rayidka ee No. 48,
b) Dhibcaha ugu yar ee 70 laga helo ALES, dhibco ugu yar ee 50 imtixaanka luqadda dhexe ee ajnabiga ah oo ay aqbashay Golaha Tacliinta Sare ama buundada u dhiganta imtixaan u dhigma. Dhibcaha ALES waxaa loo tixgeliyaa sida 70 qiimeynta horudhaca iyo qiimeynta ugu dambeysa ee codsadayaasha doonaya inay ka faa'iideystaan ​​ka reebitaanka imtixaanka dhexe.
(2) Go'aanka Guurtida, jaamacadaha iyo machadyada tikniyoolajiyada sare waxay go’aamin karaan dhibcaha ka sareysa ALES iyo dhibcaha luqadaha ajnabiga ah ee lagu qeexay qaanuunkan, marka laga reebo shaqaalaha barista maadooyinka takhasuska ay go’aamisay Golaha Tacliinta Sare ee iskuulaadka xirfadaha.
(3) In loo isticmaalo xisaabinta fasalka ka qalin-jabinta shahaadada koowaad ee heerka koowaad iyo qiimeynta ugu dambeysa
U-sinnaanta qaababka qiimeynta 4 iyo 5 ee nidaamka qiimeynta 100 waxaa lagu go'aamiyaa go'aanka Golaha Tacliinta Sare. U-sinnaanta nidaamyada kale ee wax lagu kala beddelo nidaamka '100 system' dhibco-bixinta waxaa go'aamiya waayeellada hay'adaha waxbarashada sare.
(4) Murashaxiinta, oo ah luuqadda waxbarashada iyo barnaamijyada tababbarka ee lagu meeleeyo shaqaalaha waxbaridda ee magacaabidda barnaamijka waxaa lagu meelaynayaa luuqadda waxbarashada; Ballamada loo sameynayo shaqaalaha waxbarida sida ku xusan farqada (i) farqadiisa koowaad ee qodobka 4 / 11 / 1981 / 2547 taariikhaysan iyo 5 / 80 / XNUMX, ballamaha in loo dhigo shaqaalaha waxbarida ee luuqadda ay khusayso; Xiriirka caalamiga ah iyo ballamaha hey'adaha waxbarashada sare, macalinka lagu shaqaaleysiinayo cutubyada lagu dabaqay luqadda ajnabiga waxaa looga baahan yahay ugu yaraan hal dhibic XNUMX imtixaanka luqadda dhexe ee ajnabiga ah oo ay aqbashay Golaha Tacliinta Sare ama dhibco u dhigma imtixaan la aqbalay oo u dhigma.
Codsiyada ardayda qalinjebinta ka qalin jabisa ee shaqaalaha barayaasha ah; Shuruucda Xeerka Dair ee Wax ka Beddelka Xeerka Nidaamyada iyo Mabaadi'da ku Saabsan Imtixaannada Imtixaanaadka iyo Imtixaannada Galitaanka ee lagu dabaqi karo Shaqaale kale oo aan ahayn shaqaalaha tacliinta Açık ee lagu daabacay Rasmiga rasmiga ah ee ku taariikhaysan 03.10.2019 ayaa la adeegsan doonaa.
XAALADAHA GAAR AH
(1) Kuwa loo magacaabi doono maadooyinka takhasuska ah ee ay go’aamiyeen Golaha Sare ee kuliyadaha xirfadaha waa inay lahaadaan shahaadada mastarka ama ugu yaraan labo sano oo waayo-aragnimo ah oo duurka ah haddii ay haystaan ​​shahaadada koowaad ee jaamacadda ayna caddeeyaan.
(2) Kulliyadaha mihnadaha ayaa loo sameyn doonaa shaqaalaha waxbaridda marka laga reebo shaqaalaha barista ee sadarka afraad ee qodobka 6 ee Xeerarkan.
Shuruudaha looga baahan yahay luuqadda qalaad looma baahna codsiyada.
QAYBTII Waa MACALLINKA. YDS AMA SII SII KALIYA SHARAXA
OCAYCUMA VOCATIONAL School
MAAMULKA BAARLAMAANKA MAAMULKA Hawada 1 In laga qalinjabiyo waaxda Maareynta Duulista Rayidka ama waaxda Maareynta Duulista. Markaad haysato shahaadada heerka labaad ee maadada
1 50 Injineerka Kombiyuutarka iyo Software, Injineerka Cilmiga Kombiyuutarka, Injineerka Kombiyuutarka, Injineerka Kombiyuutarka iyo Informatics, Injineerada Nidaamka Macluumaadka, Sayniska Kombiyuutarka iyo Injineerka, Injineerka Software, Injineerka Korantada, Injineerka Korantada, Injineerka Isgaarsiinta, Injineerka Kombiyuutarka, Waxbarashada Kombiyuutarka iyo Teknolojiyada Waxbarista. Si aad uga qalin jabiso mid ka mid ah barnaamijyada shahaadada koowaad iyo in ugu yaraan shahaadada labaad ee maadada laxiriirto.
1 50 In aad ka qalin jebiso Luuqada Turkiga iyo suugaanta ama Barida Luuqada Turkiga iyo inaad shahaadada Masterka ku haysato maadada laxiriirta (TÖMER)
DUGSIGA VAYCUMA EE SHAQADA EE CUNTADA iyo HAY'ADAHA
FARSAMADA LUQADA 1 Ka qalin jabiyay Waaxda Bayolojiga. Shahaado jaamacadeed ee maadada Molecular Biology ama Molecular Biology iyo Genetics iyo PhD shahaadada Molecular Biology iyo Genetics. Si loo caddeeyo in koorsooyinka Bayoolajiga iyo cilmiga jirku ay khibrad u leeyihiin codsiyada shaybaarka iyo in lagu tababbaray tabobarro sheybaar oo wanaagsan, karti tijaabo ah iyo shaybaarada qalitaanka.